Kuwo wonke umlando walo, emzini Brest waba umama abantu bezizwe eziningi. Lapha ungakwazi ukuhlangabezana futhi Belarusians futhi Russian futhi Ukraine, kanye nabamele bezinye izizwe eziningi. Zonke abavakashela leli dolobha, njalo bazizwa bangenise abakhileyo Edolobheni elisentshonalanga, Belarus. Ngamunye izivakashi uzobona e Brest emzini ukuthi idume nomlando wakhe omude kanye nemicimbi nobuqhawe.
Izikhathi lapho Brest sabekwa
I owasungula unyaka Brest 1017 ungowokuqala, futhi kukhulunywa okokuqala kuyatholakala emboniselweni Novgorod. kuphela ezifana imizi yasendulo njengoba Polotsk futhi Vitebsk sekwakhiwe ngaphambi kokusekelwa le ndawo. Ngo-2017, Brest uyomgubhela unyaka wayo Kweminyaka. Izindawo ebaluleke kakhulu ukuthi bayakufanelekela sokunaka izivakashi ku LeDolobha Elidala wesifunda.
Brest Fortress - indawo enkazimulweni nobuqhawe
Brest Fortress - ingenye ezikhumbuzo ezibaluleke kakhulu zomlando zomuzi. Ngempela, noma ubani ecabanga ngalokho ukubona ngosuku olulodwa Brest, kufanele zifakwe ohlwini ukuvakashela le ndawo wenkazimulo ubuqhawe. Lokhu kuqiniswa sabekwa emuva 30s kwekhulu le-19. Ekuphuculeni inqaba yahanjelwa ezifana abaklami abavelele Eduard Totleben, Dmitry Karbyshev.
Kuyaziwa ukuthi kuhlaselwa the Brest inqaba ngesikhathi seMpi yoMhlaba yesiBili waqala ngokuzumayo - ngaleso sikhathi bakha ingxenye enkulu yabamemezeli duty umngcele isikaniso kwaba ehlobo amakamu buqamama okukhulu kusukela izinqaba. amabutho kaHitler Bahlele ukuyisa Brest Fortress emahoreni angu 8 nje, kodwa izinhlelo zabo akuzange kube njalo. Ukuhlaselwa enqabeni kwaqala ngaphambi kwelanga - at 3:15 am Berlin isikhathi. On the inqaba wawa ibhomu ezama ukuhlasela ithangi nokuhlasela emoyeni.
Njengoba leli thimba lalimelela Brest Fortress
abavikeli le nqaba phakathi nesonto heroically bamelana bahlaseli amaNazi. Ngokusho kwamanye ama-akhawunti, kwakukhona countering emaphaketheni ukuze uthole enye i amasonto amabili. Ngemva Division 45 th ehlaselwa inqaba labhujiswa ngo orel esifundeni, iRed Army yahlasela ingobo yomlando walo. Kukhona inani elikhulu recognitions ka izinduna German ubuqhawe watholakala isibindi kanye ukumelana esikhexisayo abavikeli we Brest Fortress.
Manje insimu ka yisikhumbuzo. Brest-Litovsk inqaba - yilokho udinga ukubona e Brest zonke isivakashi komuzi. Phela, sekuwuphawu kweqiniso. Ikhumbule uJanet waloba inqwaba tinhlelo kanye sici amafilimu. Museum ivuliwe emboniselweni.
Isenzakalo esidume kunazo zonke esontweni lamaKatolika e Brest
Church of the Ekuphakanyisweni Wesiphambano oNgcwele lakhiwa 1845. Nokho, ekuqaleni endaweni yayo lakhiwa esontweni lamaKatolika - emuva 1412th. Manje ethempelini kubhekwa i lesikhumbuzo yezakhiwo okuqondene Classicism ngasekupheleni. Kuyinto isithonjana Catholic lasendulo lalibizwa ngokuthi "Our Lady of Brest." ISonto ngokwalo kuyinto sokukhulekela nesizotha nge shape geometric njalo futhi idunyiswe amaKatolika njengendawo engcwele.
Ekumbeni omuzi wasendulo ngezizathu Museum
"Berestye" Archaeological Museum akutholakali emhlabeni wonke. Izivakashi bangahlala kwesokudla kumbiwa, okuyinto bavikelekile sezulu esibi, ukwakha uphahla noma udonga. Le ndawo Imininingwane Museum imayelana 2.400 square metres. m, iningi labo ukuwa ku ekumbeni. ukujula wabo - mayelana 4 amamitha. Kukhona yake kwaba lingumuzi wasendulo, futhi kwaba izikebhe wakhe ikota. Lalinama 30 izakhiwo zokuhlala, kanye ezitaladini ezimbili. Lo muzi wasendulo liye lasinda kuze kube namuhla ngenxa yokuthi ngesikhathi sonke isikhathi kuze abavubukuli kwaba ngaphansi ungqimba marsh.
Manje abacwaningi bayaqagela ukuthi uma waphoqeleka abakhileyo emzini wasendulo ngokuzumayo bashiye amakhaya abo. Museum kwavulwa ngo-1982 futhi manje ungomunye izindawo ezibalulekile ukuvakashela izivakashi. Ikakhulukazi labo sizibuza ukuthi ukubona e Brest nezingane. Ngemva Berestye - omunye lamadolobha amadala kakhulu Belarus: kukhulunywa okokuqala ngakho sihlehlela emuva ngonyaka 1019.
Fortress White Tower - indawo ezinganekwaneni
Ukwakhiwa inqaba yakhiwa kuleli isigamu kwekhulu XIII yesibili. Itholakala edolobheni Kamenetz we Brest esifundeni. I inqaba Yakhiwa njengoba isakhiwo ukuzivikela ku-oda we Galician-naseVolyn isikhulu uVladimir Vasilkovich. Ukwakhiwa has a ukuphakama 30 metres, kanye ukushuba kwezingange zawo - 2.5 amamitha. Towers analogue Belaya Vezha yayikhona kweminye imizi yasendulo Belarusian: Polotsk, Grodno, Turov, Mstislavl, e Brest. Kodwa izikhathi zethu kusinde kuphela ukuqinisa kuyi Kamenetz. Kulabo abathanda, yini ukubona e Brest nasezindaweni ezizungezile, Ukuvakashela White Veigy kungenziwa ngokuphepha afakwe ohlwini izindawo eziningi ezithakazelisayo.
Phela, kuciniswa kwenhlanganisela zinganekwane eziningi zasendulo. Ezinye bendawo bakholelwa ukuthi umbhoshongo awuzange eyakhelwe ukuzivikela, futhi lakhiwa njengoba iwuphawu udumo uquketheni Prince Vasilkovich. Kukhona umbono ukuthi, kunalokho, sidalwe esinqumweni isikhulu ngenjongo ejele White Vezha umfowabo. Kungase kuqashelwe futhi emasikweni inqaba, esahlanganisa kusukela ezikhathini zasendulo. Ngokwesibonelo, kwathiwa babecabanga ukuthi umbhoshongo akazange eyakhelwe amadoda, futhi imidondoshiya. Zonke lezi zinganekwane ngeke kube mnandi futhi ulwazi kulabo banesithakazelo kulokho ungabona e Brest nasezindaweni ezizungezile. Ngakho, siya ku ukuhlola izinto.
Indawo egcina amagugu esizwe yamanani ukulondolozwa - lokho ukubona e Brest, kufanele nakanjani
Elinye iphuzu ekhangayo zonke izivakashi umuzi Museum of amagugu ukulondolozwa. Kukholakala ukuthi lokhu Museum futhi alinaso analogue emhlabeni. Indaba okuthakazelisa kakhulu ukutholakala yayo. Njengoba Brest yidolobha esisogwini umngcele, ngaphambi amasiko kwadingeka ukuba njalo wayithatha eziyigugu ezazishushumbiswa ngokungemthetho. Ngokuhamba kwesikhathi baba kakhulu kangangokuba wanquma ukusungula Museum ekhethekile ngabo.
Ekuqaleni kwakugcwele amakamelo ayishumi kuphela, futhi ukuchayeka yayo kwaba izinto mayelana 300. Kodwa njengoba amasiko enze ngokucophelela imisebenzi yabo, ukudlula kwesikhathi inombolo uvukile izikhathi ezimbalwa nje. Lapha ungabona izinto eziningi ezithakazelisayo: imifanekiso, kwakudala, imisebenzi ehlukahlukene yobuciko. A ekamelweni elihlukile Sizokwenza imisebenzi efanele amasiko Brest. Phela, abasebenzi bayo uvinjelwe nokukhishwa izinto eziningi ezibalulekile abavela emaphandleni.
Yini ngisho yabhekisela Brest? Yini ukubona kuyo i izivakashi abavamile? Eduze edolobheni enye indawo ezithakazelisayo izivakashi - ipulazi nentshe. Labo kulinganiselwe isikhathi futhi sizibuza ukuthi ukubona e Brest izinsuku 2, ungafaka kuhlu lwakho futhi kule ndawo. Intshe Farm Brest esifundeni iyona enkulu kunazo yonke iYurophu. Izivakashi ukubavakashela epulazini - kulapha lapho ungakwazi uxoxe izinyoni engavamile.
ukuziphatha intshe akuhlukile indlela azibonakalisa kwezimo ezivamile kwemvelo. Izinyoni ukusebenzisa enye ngemva kwenye, ingena ebesengenile, futhi izivakashi ngothando cute. Yini ukubona e Brest nezingane noma nesithandwa sami? Le ndawo ngeke abashiye ubani ngaphandle imizwelo. Ngoba bhekani angaphila cishe 200 abameleli nentshe emhlabeni. Leli pulazi elingu-kuyinto kuhlanzekile futhi kucocekile, kodwa uma ufuna ukwazi ukubhuka uhambo insimu yalo.
Sovetskaya emgwaqweni - zonke izakhiwo engcono endaweni eyodwa
Kulabo kungukuthi uhlela ukuya ngaphandle komuzi noma ngubani babe nesikhathi esincane kakhulu engase abe nesithakazelo eyaziwa Sovetskaya emgwaqweni. It osuka kule Ordzhonikidze Street kuze kube yashayisa unqenqema Mukhavets River. Ngokuhamba nomlando wayo, emgwaqweni washintsha amagama amaningi - wayengadlali futhi izigidi zabantu, futhi Generalshtrasse, futhi kusukela ngo-1944 iqanjwe eSoviet. Lapha kule-yalolucwaningo 30 XX leminyaka babe izimakethe abangamaJuda. Street ashisiwe izikhathi eziningi, kodwa kabusha kaningi.
Ngo-1863, isinagoge lalisetshenziswa eyakhelwe lapha. Ezikhathini zaseSoviet, zako zakhiwa kabusha, futhi yaphenduka yamabhayisikobho, futhi 1970 lesi sakhiwo futhi uguqulwe. Empeleni leli hholo zamanje walondolozwa kusukela ngalezo zikhathi. Ekuqaleni mgwaqo Soviet kuyinto St Nicholas inqaba anobuhlobo.
Legend of the "Boots Happy"
Yini Kuyathakazelisa ukubona e Brest okwamanje? Lapha, emgwaqeni Soviet, kuba isikhumbuzo elincane ngokuthi "Boots Happy" okuletha inhlanhla elihle nokuba nengcebo. Yasungulwa hhayi kudala - esiveza encane ukufakwa 2013. Noma ubani ofuna ukuheha empilweni yakho inhlanhla nemali enhle, kungaba yisibonelo "amabhuzu Happy."
Ngokusho yetinsita ngasekupheleni kwekhulu le-19, u-Anna Levitsky wazalelwa e Brest. Wazamukela kusukela inhlanhla enkulu kamkhulu wayo, kanye pair of amabhuzu eziletha injabulo. Kwake kwathiwa ubani uzokwazi zama amabhuzu Levitsky, ecebile fabulously, futhi kuzothatha zonke izindaba imali. Yisikhathi abesabekayo impi, futhi Anna balahlekelwa yikho konke ababenakho. Kodwa ngemva kwempi, izinto ngokushesha wenyukela entabeni. Anna Levitsky wayeqiniseka - lonke iphuzu umlingo amabhuzu. Omunye izicathulo lalahleka ngesikhathi seMpi Yezwe Yokuqala eLvov. Kodwa Levitsky yesibili etha indodana yakhe, futhi wakuthola eziyisikhombisa zegolide. Lost amabhuzu, okuyinto eyigugu kakhulu, futhi ngifuna namuhla.
izibani Street e Brest
Yini ukubona e Brest ngosuku olungu-1? Ngokungangabazeki, uma sinesikhathi ngemuva kokuvakashela ezinye izindawo isithakazelo, ungachitha kusihlwa kwelinye yezindawo romantic kakhulu emzini. Uma uhlelo emgwaqweni abavamile eyaba khona kusukela ngo-1909, manje saziwa ngokuthi lantern emgwaqweni. Ilungiselelo ehlezi omkhulu olunothile chestnut. Kuye adalwe abaklami izingcweti nasekuqiniseni isipho Day lomuzi 2013. Zonke izinkanyiso zenziwa ensimbi, bese enamathela ezikudlayo kwenziwa nge umphumela wokuguga. Futhi ngaphandle inqwaba izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu kanye art izinto ezihlukahlukene.
Phakathi izibani amane abatholi ezimbili ezifanayo - ngamunye wabo senziwa ngendlela ethile. Kulabo abazi ukuthi yini ukubona e Brest intombazane noma kuphi ukuchitha usuku lwezithandani, izibani alley kuyoba omunye izixazululo engcono. Iningi izibani ezenziwe ngesimo a subject ethize. Zibonisa imininingwane yalolu abashisekeli, izinkampani ukutshala kuvulwa Mall. Nokho, kukhona izibani ezibonisa izikhathi lokusungula NV Gogol.
Nezokungcebeleka isikhungo "Pelagiada" ku laseStavropol esifundeni: Ukuvakashela ubunjalo fabulous
Delicious ezenziwe ekhaya: izikebhe ubusika utamatisi nezinye imifino